China HFD Horizontal Froth Pump (Repalce AHF) vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Magnetic Dhizaina Pump
Pombi yemvura yakachena
Nyanzvi & maInjiniya
YANGU Magnetic Kutyaira Pump
MZF Magnetic Dhizaina Pump
API610 VS4 Pump LYD Muenzaniso
API610 OH2 Pump CMD Muenzaniso
TCD Cyclo Vortex Pombi (Repalce TC)
AIVA Heavy hasha Duty Slurry Pump (Repalce AH)
Unyanzvi: 0-3151m3 / h
Materail: CR27, Cr28, CD4MCu, yerabha liner
HFD Slurry pombi yakatwasuka-inorema hasha basa froth slurry pombi. mashandisiro ayo ari kupomba slurry neyakaomarara froth. yeakasarudzika dhizaini-inducer blade impeller yekugadzirisa iri dambudziko nyore.
Tora diki diki, kushanda kwakanyanya.
Yakakosha froth impeller ine hombe inlet saizi, iyi bhenefiti kune yakakura saizi yakasimba inouya Pane musiyano pakati pekupomba froth slurry uye yakajairwa slurry.HFD slurry pombi yeakakwira kuita kupomba yakakwira viscosity slurry.
Dambudziko rekubata froth mune imwe nzira maseketi anogona kunetsa kwazvo. Froth kazhinji mweya unosunga yakajairwa pombi. Iyo froth inducer blade impeller inogadzirisa iri dambudziko. Mhedzisiro yacho yakanyanya kuwanda, kusarudzwa kwepombi diki, uye kugona kwepamusoro
Imwe bhenefiti yeiyi froth impeller dhizaini uye yakanyanyisa kuwanda ndeyekuti inosimudza mitsara yevasungwa mitsara iyo pombi yecentrifugal inogona kubata Sezvo dambudziko guru rekubata froth rakafanana neiri rekubata viscous slurries, kutora iyo slurry mupombi kuti igone kupomedzerwa, iyi pombi yakaratidza kuve mutambi wepamusoro mune dense media viscous slurries. Pamusoro pezvo, matambudziko ekuyerera anowanzoitika kune mamwe macrifugal pombi dhizaini pane kuyerera kwakadzika anobviswa pane viscous slurries. Iyo indasitiri yekumigodhi ndiyo muenzaniso wekutanga wekuvhiya kunotambudzwa nefoth uye yakanyanya viscosity matambudziko. Mukusunungurwa kwemaminerari kubva kune ore, inowanzo tenderedzwa kuburikidza nekushandiswa kweakasimba mafiroti ejenti. Makobvu akaomesesa anotakura mhangura, molybdenum kana miswe yedare kuti idzoserwe nekuenderera mberi kugadziriswa. Aya mabhuru akaomarara anogadzira bongozozo neyakajairwa mapombi epombi anowanzo kukonzera kusarudzwa kwepombi dzakakura uye dzisina basa. Iyo pombi yeFroth yakakura zvidiki uye inoshanda zvakanyanya. Iyo inducer impeller uye yakanyanyisa kuwanda inonyatso kuvimbisa iyo froth kana viscous slurries kupinda mukati mechisimba ichibvumidza iyo pombi kuendesa iyo kunotevera kuenda. mushandisi zvine ushamwari.
Akazvarwa nefuru pombi kugadzirisa matambudziko maviri mumigodhi: froth, yakakwira viscosity zvinwiwa.
Iyi pombi inogona kushandiswa zvakanyanya mukuchera mhangura, alumina kuchera, ore.
Pashure: HADPP Heavy Duty hasha Slurry Pump Mune Akateedzana (Repalce AHPP)
Zvadaro: HSD Inorema Slurry Duty Pump (Repalce XU)
SXD Centrifugal Pump
VFD Vertical Froth Pump (Repalce AF)
WAD isina kusimba hasha Duty Slurry Pump (Repalce L / M)
API610 BB1 (SHD / DSH) Pump
SSD Inonyudza Pombi
© Copyright - 2019-2020: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.